Alshabaab: Waan u aargudnay Abuu Zubeyr – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xarkada Alshabaab ayaa war qoraal ah kasoo saacado badan qaatay oo khamiistii ku qaadeen saldhiga ugu weyn AMISOM ee Xalane.
Dagaalka oo ay fuliyeen gaari is qarxiyey iyo rag dagaalamayey ayaa bilwoday salaadda duhur kadib maliintii Khamiista heyd, wuxuuna soo gebageboobay shalay subax Jimcihii.
Alshabaab ayaa sheegtay in weerarkaas ay ku dileen ilaa 17 ruux oo sigu jira ciidamada Midowga Afrika iyo saraakiil reer Galbeed ah.
“Cutubyo Ciidamo gaar ah oo ka tirsan Jihaazka Amniga ee Mujaahidiinta ayaa howlgal halyeeynimo ku qaaday saldhigga ugu weyn ee cadowga uu ku leeyahay Soomaaliya, kaas oo ah Xerada Xalane, Waxayna halkaas ku dileen in ka badan 17 Saliibiyiin ah oo ay ku jiraan Abaanduuleyaal Afrikaan ah iyo Laba Calooshood u shaqeystayaal Cadaan ah” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Xarakada AlShabaab.
Alshabaab ayaa yiri “Xerada Sida Aadka Amnigeeda loo ilaaliyo ee Xalane Waxay Hooy u tahay Taliska Dhexe ee Ciidamada Kufaarta Afrikaanta, Sidoo kale Waxaa Safaarado ku leh Dowlado badan oo ay ku jiraan reergalbeedka, sida Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waxaa sidoo kale Xafiisyo ku leh Hay’ado jawaasiis oo dhowr ah kuwaas oo ay ku jiraan CIA-da Mareykanka, MI6-ta Ingiriiska iyo MOSSAD-ka Yahuudda. Sidoo kale Waxaa ku yaalla Xabsiga ugu weyn Soomaaliya ee dhulka Hoostiisa ah, kaas oo sidoo kale CIA-du u adeegsato tacdiibka Maxaabiista Muslimiinta” Ayaa lagu yiri War Saxaafadeedka.
Alshabaab ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Xalane uu aargud u ahaa Amiirkii hore ee Xarakadaas Sh. Mukhtaar Abuu Zubeyr kaas oo bishii September ee sanadkan lagu dilay duqeyn ay gobolka Shabeellaha Hoose ka geysteen diyaaradaha Mareykanka.
Alshabaab ayaa sheegay inuu xerada Xalane ku yaalla talis laga hago howlgalada diyaaradaha Drones-ka ee weeraray Abuu Zubeyr.
“Weerarkan Halyeeynimo ee ay fuliyeen Ciidamada Mujaahidiinta Wuxuu beegsanayey Hogaanka Kufaarta Afrikaanta iyo Xulifadooda reergalbeedka, Wuxuuna aargud u ahaa Istish-haadka Amiirkii Xarakada Mujaahidiinta AlShabaab Sh. Mukhtaar Abuu Zubair Allaha ka aqbalee iyo Sidoo kale boqolaal Muslimiinta beri-mageydada ah ee sida joogtada ah Loogu Tacdiibiyo Xabsiyada qarsoodiga ah ee Ku Yaalla Xeradaas” Ayaa lagu yiri Bayaanka Alshabaab.
Bayaanka laguma sheegin tirada ciidamadii Alshabaab ee fuliyey weerarka balse waxay sheegeen in tiro ka mid ah ciidamadii fuliyey weerarka ay soo noqdeen iyagoo badqaba, ayna yihiin kuwa ku dhiiran fulinta weerar kale.
Alshabaab ayaa ugu dambeyntii hanjabaad u diray ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, waxeyna sheegeen iney ku qaadi doonaan weeraro dheeraad ah.
Weerarka Alshabaab ku qaadday xerada Xalane ayaa ku geeriyooday ilaa 5 ka tirsan ciidamada AMISOM iyo qof ka mid ahaa shaqaalaha rayidka ah.
Sidoo kale, waxaa weerarkaas lagu dilay in ka badan 5 ka tirsan ragii weerarka soo qaaday, halka hay’adda Nabad Sugidduy sheegtay in 2 ka mid ah gacanta lagu dhigay.
AMISOM: Col Xumud nooma aha Afhayeen!